Maraykanka Oo Weerarro Garoowe Majaro-habaabisay Ku Xasuuqay Ciidamo Katirsanaa Maamulka Gal-mugud | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Maraykanka Oo Weerarro Garoowe Majaro-habaabisay Ku Xasuuqay Ciidamo Katirsanaa Maamulka Gal-mugud
Hargeysa:(Hubaal)-Weerar qorshaysan oo ciidamada cirka ee maraykanka iyo cutubyo katirsan ciidamada maamulka Punltland qaadeen, ayaa lagu laayey ugu yaraan 22-askari oo katirsanaa maamulka Gal-mugud, halka tiro kalena lagu dhaawacay, isla-markaana laguu gubay gaadiid dagaal. Sida saraakiil katirsan maamulka Gal-mudug ay sheegeen, waxa weerarkaas oo ka dhacay goob lagu magacaabo Jeexdin oo dhinaca Waqooyi ka xigta magaalada Galkacyo laga soo abaabulay magaalada Garowe, iyadoo maamulka Puntland ay xogo qaldan siiyeen ciidamada maraykanka oo diyaaradahoodu ka qayb qaateen weerarkaas.
Weerarkan oo saqdii dhexe ee habeen hore dhacay, ayaa la sheegayaa in ciidamada maraykanka loo sheegay in goobta la weerarayo ay ku sugan yihiin ciidamo katirsan xarakada Al-shabaab, kuwaas oo qorshaynayey sidii ay Puntland usoo weerari lahaayeen, balse warkaasi waxa uu noqday mid run ahayn, maadaama ciidamada dhintay ay noqdeen qaar katirsanaa maamulka Gal-mudug oo ay colaadi gaamurtay ka dhaxayso dhiggooda Puntland.
Maamulka Puntland, ayaan weli wax war ah kasoo saarin dhimashada iyo khasaaraha baahsan ee soo gaadhay ciidamada katirsanaa Gal-mudug, waxana meydadkii lagu aasay duleedka magaalada Galkacyo oo shacab aad u cadhaysani iskugu soo baxeen, isla-markaana lagu gubay calanka waddanka Maraykanka.
Ma jiro war kabaxsan midka maamulka Gal-mudug ka yidhi dhimashada ciidamadooda, waxana la sugayaa jawaabta uu maraykanka oo ah ciddda weerarkan qaaday ay ilaa iyo haatan bixiyeen, waxase la filayaa inay soo bixi doonto xogaha ku saabsan sababta weerarkaas loo qaaday, isla markaana loo bartilmaameedsaday ciidamada xeryahooda ku sugnaa.